Cyclalg, ny tetikasa fananganana orinasa biolozine misy ahidrano | Green Renewable
Portillo Alemanina | | Biodiesel, Biomassa
Cyclalg dia tetikasa eropeana iray izay ny tanjony dia ny famoronana orinasa mpamokatra orinasa biolojika anaovana ny dingana rehetra ilaina ary hanan-kery hahafahana mamokatra biodiesel amin'ny alàlan'ny fambolena microalgae. Ivon-teknolojia enina avy amin'ny Frantsa, Navarra ary Euskadi ary haharitra telo taona eo ho eo miaraka amin'ny tetibola 1,4 tapitrisa euros.
Tanjona ny hamokarana biodiesel sy ny solika hafa amin'ny alàlan'ny fambolena microalgae, mamorona modely vaovao amin'ny toekarena boribory izay ny fako biolojika vokariny dia ampiasaina ho sakafo ho an'ny microalgae ary hanampy azy ireo amin'ny fitomboany. Manararaotra ny biomassan'ny ahidrano koa izy ireo, manitatra ny androm-piainan'ny fako mandritra io fotoana io ary afaka mahazo vokatra sasany izay ampiasaina amin'ny indostrian'ny simika, angovo ary ny fambolena.
Neiker-Tecnalia, ny Centre Technology Technology Basque, dia miandraikitra ny fandrindrana ny tetikasa Cyclalg. Ho fanatanterahana izany dia hiasa hametraka fepetra ahazoana tombony sy maharitra amin'ny voly microalgae amin'ny famokarana biodiesel.
Ity tetikasa ity dia dingana manaraka amin'ny tetikasa teo aloha Energreen izay naharitra tamin'ny 2012 ka hatramin'ny 2014, izay ny mpikambana ao aminy no maro an'isa mitovy amin'ny an'ny Cyclalg. Ity tetikasa teo aloha ity dia nanamarina ny fahaizan'ny ahidrano hahafahana mamokatra biodiesel ary afaka mampiasa ny biomassa. Ny tsy hita, ankoatry ny zavatra hafa, dia ireo olana isan-karazany izay hita rehefa nampiasa fako biolojika nalaina tamin'ny solika. Ireto sisan-javatra ireto dia tena ilaina tokoa noho ny loharanon'ny proteinina sy ny siramamy mba hanina ho an'ny microalgae.
Etsy ankilany, hiezaka ihany koa izy hanatsara ny fiainana mahasoa ny fako ary hanao izay hahasoa azy indrindra, ankoatry ny biodiesel, ny biomethane synthesizing, ny feed manufacturing ary ny biofertilizers. Ity tetikasa ity dia vatsian'ny 65% ​​vinan'ny Tahiry fampandrosoana ho an'ny faritra eropeana. Misaotra Fandaharam-pianarana Interreg VA Spain-France-Andorra izay faharetany dia hatramin'ny 2014 ka hatramin'ny 2020 ary ny tanjony dia ny hampiroborobo ny fampidirana toekarena sy sosialy amin'ireo faritra ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Biofuel » Biodiesel » Cyclalg, tetik'asa eropeana amin'ny famoronana orinasa biorefera misy ahidrano
jose lopez dia hoy izy:
Marina fa afaka mampiasa 1000km ianao amin'ny litatra
Mamaly an'i jose lopez
Manana zaridaina biolojika ao an-trano ary mifehy ny sakafo
Nanaiky ny governemanta alemanina handrara ny fanaovana frack mandritra ny fotoana tsy voafetra